မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဖြစ်ရလေ အာဂျီရှီရယ်…
Posted by mabaydar at 10:02 PM
Body Language တွေနဲ့ နားလည်မှုလွဲကုန်တာကိုး..
6/08/2009 12:28 AM
မဗေဒါရယ် တော်သေးလို့ ပြန်ရှင်းမိလို့ပေါ့
တော်ကြာ အာဂျီရှိကြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့နေမှာ :)
အော်… ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ အာဂျီရှီ ရယ်
အော်… ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ မဗေဒါ ရယ် :D
6/08/2009 12:48 AM
6/08/2009 1:01 AM
အေးလေ ထိပ်ပြောင်ကြီးနဲ့ ခပ်နေတာကြီးကို မိုက်တယ်နော့် ဒရိုင်ဘာတဲ့ မထင်ရဘူး သူဌေးသားလား မှတ်ရတယ်။ ပြန်တွေးတိုင်း ရီနေရမဲ့ အဖြစ်လေးတွေပဲ မဗေဒါရေ.. (အဟဲ မ ထည့်ခေါ်တာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ဒေါသလဲ ဖြစ်မနေနဲ့ ဖြစ်နေရင် မုန့်လိုက်ဝယ်ကျွေး )
wow, nice and fantastic trip. still waiting post from Korea Trip.
နည်းနည်းလေးပဲ လွဲသွားတာပါ ... :D အာဂျီရှီက ခင်စရာကောင်းတဲ့ပုံပဲနော်။
ညီမလေးခရီးစဉ်တွေ ဖတ်ရတာ သဘောကျနေတာ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။..
မဗေဒါတို့လုပ်လိုက်ရင်... သဘောကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့လူတောင် မျက်နှာညိုးသွားစေရမယ်။ ဟဲ ဟဲ။ စတာနော်။
6/10/2009 5:52 AM
အစ်မတို့ကတော့ ဘောဒီ Language ကိုတော်တော်
ကျွမ်းပုံရတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံလူဆို လိုက်ရိုက်လိမ့်မယ်
6/12/2009 1:53 PM